မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များတွင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီးထွားလာနှင့်ထို့ထက် ပို. ဒါထူးခြားတဲ့တစ်ချိန်ကအလှအပကြည့်ဖို့သွားကြဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိ အီသီယိုးပီး ။ နှင့်သင့်ခရီးစဉ်စီစဉ်သည့်အခါပေါ်ထွန်းသောအဓိကပြဿနာများကိုတစ်ဦး - သငျသီယိုးပီးယားမှာရှိတဲ့ရုရှားများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်ရှိမရှိ။ ရှာဖွေကြပါစို့!
မော်စကိုတွင်အီသီယိုးပီးသံရုံးရှင်းပါတယ်အဖြေ: Belarusian, ရုရှားအဘို့ဤတိုင်းပြည်သို့သွားရောက်ရန်, ကာဇက်စတန်နှင့်အခြား CIS နိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံသားများ၏ဗီဇာလိုပါတယ်။ သူမ၏အထဲက Check ကျွန်တော်တို့ရဲ့ compatriots2နည်းလမ်းတွေနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါ Addis Ababa အတွက်တိုင်းပြည်အတွင်းဆိုက်ရောက်၏နေ့၌ Bole အဘိဓါန်လေဆိပ် ။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် - ကပြန်လာ၏နေ့စွဲပြီးနောက်အနည်းဆုံးအခြား 3-4 လအတွင်းလည်ပတ်ရမည်,
တဦးတည်းဓာတ်ပုံကို 3x4 စင်တီမီတာ (အရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်);
ပရိုဖိုင်းကို - ကအင်္ဂလိပ်လိုဖြည့သို့မဟုတ် Russian နှင့်လျှောက်ထား၏လက်မှတ်ထားရန်သေချာစေပါရမည်,
မှာအခန်းပေါင်း booking အကြောင်းသတင်းအချက်အလက် ဟိုတယ် (ကမူလသို့မဟုတ်ဖက်စ်များကိုဖြစ်နိုင်) သို့မဟုတ်သေချာပေါက်ခရီးသွားများ၏ကြာချိန်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ပေးထားရမည်ဖြစ်သည့် (အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှ) အထူးဖိတ်ကြားချက်။
အဆိုပါကောင်စစ်ဝန်ရုံးကို pre-မှတ်တမ်းတင်ပေးမထားဘူး။ စာရွက်စာတမ်းများ (အဘယ်သူသည် ပြော. အေဂျင်စီသွားလာနိုင်ပါသည်) လူတစ်ဦးအတွက်သို့မဟုတ်တစ်ဂေါပကများကတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ 15:00 ကနေ 17:00 သည်အထိထို့နောက် 9:00 ကနေ 13:00 မှ 9:00 ကနေ 13:00 ငှါ၎င်း, Fri နှင့် - မွန်နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့: applications များနှင့်ပြဿနာဗီဇာအချိန်ဇယားအပေါ်အဆင်သင့်လကျခံဖို့ဆန္ဒရှိ။
အဆိုပါကောင်စစ်ဝန်ရုံး $ 40 အသီးသီး၏တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်မှာ 1 သို့မဟုတ်3လကာလအဘို့တစ်ခုတည်း entry ကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးနှင့် $ 60, ဒါမှမဟုတ်ကာလတစ်ခုမျိုးစုံ 3/6 လကြာနိုင်ပါတယ် - သူတို့ $ 70 နှင့် $ 80 ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာသီယိုးပီးယားကသူ့ဗီဇာစောင့်ဆိုင်းရန်မရှိကြပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကတင်သွင်းခဲ့သည့်ရက်စွဲကနေ2အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းကြာပါသည်။ စူးရှသောလိုအပ်ချက်အတွက်ကောင်စစ်ဝန်၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူတော်အဘို့တောင်းဆိုတဲ့အခါခရီးသွားဧည့်ပင်တစ်နေ့, ဗီဇာရနိုင်သညျထ။
စာတမ်းများကိုအောက်ပါလိပ်စာသို့ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်တင်ပြရန် :. မော်စကို, Orlov-Davydovsky Pereulok 6. သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုရှင်းပြ, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး: (495) 680-16-76, 680-16-16 ။ အီးမေးလ်ပို့ရန်သံရုံး: eth-emb@col.ru ။
အီသီယိုးပီးအတွင်းဆိုက်ရောက်ဗီဇာရဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် Bole အဘိဓါန်ခိုင်လုံသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ပြီးစီးခဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပုံစံ (အင်္ဂလိပ်က Pre-ဖြည့်ပါ) ပေးလေဆိပ်မှာလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်တစ်ဦးအပြန်လက်မှတ်ကိုပြသသို့မဟုတ်သင်အာဖရိကတိုင်းပြည်တစ်အားလပ်ရက်စီစဉ်နေကြသည်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်များအတွက်လုံလောက်သောရံပုံငွေရှိသည်သောသကျသပွေဖို့တောင်းနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကသူ့ဘဏ်အကောင့်မှတစ်ဦးကြေညာချက်ဖမ်းပြီး, ကဒ်ပေါ်တွင်ပိုက်ဆံတစ်အမြောက်အများနှင့်အတူခရီးထွက်လျှင်။ အီသီယိုးပီးသို့ entry ကိုများအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေများမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့စီးနင်းများအတွက်တစ်လျှောက်ယူ သာ. ကောင်း၏။
ဆိုက်ရောက်ဗီဇာအပေါ်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ငွေပေးချေ၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ "ဆိုက်ရောက်အပေါ်ဗီဇာ" နဲ့ရုံးအတွင်းဖြစ်ပျက်နေသည်။ သင့်အနေဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုများ၏ရှေ့မှောက်၌တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်ဗီဇာစတစ်ကာ paste လုပ်ထားတဲ့ပါလိမ့်မည်, သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုသွားကာ entry ကိုတံဆိပ်ခေါင်းရရှိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုက်ရောက်အပေါ်ဗီဇာ Duration: နှင့်ကုန်ကျစရိတ်
လေဆိပ်မှာ, သငျသညျအစဆွဲနိုင်ပြီး Single-entry ကို (1 သို့မဟုတ်3လကြာတဲ့ကာလများအတွက်) ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနှင့်မျိုးစုံ (3 သို့မဟုတ်6လ) ။ ရွေးကောက်တော်မူထို option ပေါ် မူတည်. $ 50 မှ $ 100 အထိထံမှပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ ငွေပေးချေမှုရမည့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်ငွေသားကိုဖန်ဆင်းသည်။ ခရီးသွားလာနေစဉ်သင်သည်မည်သည့်အခက်အခဲများရှိပါက, သင်အမြဲအီသီယိုးပီးအတွင်းရုရှားသံရုံးသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဆိုတာသတိရပါ။
ဒါဂတ်စကာ - ဗီဇာ
နမီးဘီးယား - လေဆိပ်
လီဆိုသို - ဆွဲဆောင်မှုများ
ပိုးသတ်ဆေး "ကလပ်ဆို" - ညွှန်ကြားချက်
မိမိလက်နှင့် Glass ကိုခဲတံ
Morse က blackcurrant
Porsche Paul Walker ၏အသေခံခြင်း၏အပြစ်ရှိသည်ဟုမတှေ့
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စမ်းသပ် 1 သုံးလပတ်
တစ်အရသာရှိတဲ့ mash အာလူးချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
လူတ Scorpio နှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲဘယ်လိုနေသလဲ?
Skewers အပေါ် appetizers
ခရမ်းချဉ်သီး-အတော်များများကမျက်စိ - မယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာချက်ပြုတ်နည်းများအရှေ့တိုင်းဟင်းလျာများ
အစားအသောက် "20 ရက်အတွင်း"